Immisa dhalasho ayaa loo oggol yahay Ruushka waxaa nidaaminaya qodobka 62aad ee Dastuurka Federaalka Ruushka. Sharciga Aasaasiga ahi ma mamnuucayo dhalashooyinka badan. Ma jiro erey u dhigma fiqiga.
Immisa Jinsiyad QOF MALAHAN AY LEEYAHAY?
Sharciga Xiriirka Ruushka kuma xadidayo muwaadiniintiisa tirada dhalashada la helay. Yukreeniyaan, mamnuucida baasaboorka labaad ayaa jira, laakiin waxaa jira siyaabo looga ag dhawaado. Kazakhstan, aaggan si adag ayaa loo xakameeyaa.
Immisa Jinsiyad ayaa laga oggol yahay Ruushka?
Immisa dhalasho ayaa loo oggol yahay Ruushka waxaa nidaaminaya qodobka 62aad ee Dastuurka Federaalka Ruushka. Sharciga Aasaasiga ahi ma mamnuucayo dhalashooyinka badan. Ma jiro erey u dhigma fiqiga. Ruushku waxay leeyihiin xoriyad buuxda oo ay wax ku doortaan. Immisa jinsiyadood ayuu qofku yeelan karaa, qof kastaa wuxuu go’aansadaa shaqsiyan, iyadoo ku xidhan hadba rabitaankiisa iyo baahidiisa. Shuruudda keliya ee gobolka looga baahan yahay waa in lagu wargaliyo xaaladda cusub adeegga socdaalka ugu dambeyn 60 maalmood kadib.
Immisa Jinsiyad ayaa laga heli karaa UKRAINE?
Jawaabta su'aasha ah imisa dhalasho oo uu qofku ku yeelan karo Ukraine ayaa ah mid aan mugdi ku jirin - mid, Yukreeniyaan. Jinsiyada badan waxaa mamnuucaya dastuurka gobolka.
Laakiin waddankan, imisa jinsiyadood ayaad yeelan kartaa, qof kastaa si madax-bannaan ayuu u go’aansadaa. Way adag tahay in la ciqaabo kuwa ku xadgudba nidaamka oo aan jirin.
Haddii ay suurta gal tahay inaad haysato 2 baasaboor ama xitaa saddex-dhalasho - waxay kuxirantahay kartida qofka. Ka dib oo dhan, dhammaan waddammada kuma qasbana inay ku wargeliyaan Ukraine in muwaadinkeeda uu helay baasaboor kale.
Waxaa hadhsan in si faahfaahsan loo barto muwaadinimadu waa maxay, oo la adeegsadaa fursadaha cusub ee furmay.
Suura gal ma tahay in LABA LABAAD MUWAADIN LAGU QAADO KAZAKHSTAN?
Immisa jinsiyadood oo aad ku yeelan karto Kazakhstan waxaa aasaasay dastuurka, qodobka 10aad ee Sharciga Aasaasiga ah. Ku xadgudbayaashu waxay xaq u leeyihiin ganaax iyo masaafurin. Haddii aad haysato dhalashada Kazakhstan, go'aankaaga dhalashada waa in la tixgeliyaa oo la miisaamaa.
↑ meeqo dhalasho ayaad heli kartaa ↑ meeqa dhalasho ayaa loo ogolyahay ↑ imisa dhalasho ayaa laga ogolyahay Ruushka ↑ imisa dhalasho ayaa laga oggolyahay Ukraine ↑ imisa dhalasho ayaa laga oggolyahay Kazakhstan ↑ Ruushka laba dhalasho ↑ Ukraine laba dhalasho ↑ Kazakhstan oo ah laba dhalasho ↑ Ruushka dhalashada labaad ↑ Ukraine dhalashada labaad ↑ Kazakhstan dhalashada labaad ↑ laba dhalasho ayaa loo ogolyahay ↑ dhalashada labaad loo ogol yahay ↑ ganaax laba dhalasho ↑ ganaax labaad oo muwaadinnimo ↑